काठमाडौंमै चर्कियो भारत र चीनको संघर्ष। कृष्ण पहाडीको डरलाग्दो इशारा। देश डुबाउने दुई पात्र ! ~ Canadanepal.net
काठमाडौंमै चर्कियो भारत र चीनको संघर्ष। कृष्ण पहाडीको डरलाग्दो इशारा। देश डुबाउने दुई पात्र !
काठमाडौंमै चर्कियो भारत र चीनको संघर्ष। कृष्ण पहाडीको डरलाग्दो इशारा। देश डुबाउने दुई पात्र ! POWERNEWS Presenter:- Tek Narayan Bhattarai